Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCSC si Nigeria & ụwa | TAA
Ụlọikpe kpochapụrụ arụmọrụ JAMB na ebubo iwu akwadoghị iwu
Nigel Winterburn: M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na Patrick Vieira dochie Arsene ...
Home Tags FCSC
Ntughari: AGF Malami gbara ọrụ obodo iji weghachi Abdulrasheed Maina
Otu ụlọ ọrụ ndị na-anọchite anya ndị ụlọ ọrụ kwuru na Abubakar Malami, bụ ọkàiwu na-ahụ maka ndị gọọmenti (AGF), na ntinyeghachi nke Abdulrasheed Maina n'ime obodo.
Ozi gbasara ozi gbasara ịrịọ banyere Yushau Shuaib
N'ihe ngosi nke ihe omume di omimi, Ministry Ministry nke Ozi n'okpuru nlebara anya nke Alhaji Lai Mohammed choro ikpe maka nweghachi nke onye ekwuru okwu nke National Agency for Management Agency (NEMA), Mr. Yushau Shuaib, n'ime oru obodo.
Isi nke Ọrụ kwadoro nhazi nke 9 ndị odeakwụkwọ na-adịgide adịgide
Onye isi nke ọrụ obodo nke Federation (HCSF), onye mmeri Winifred Oyo-Ita, akwadola nhazi nke ndị odeakwụkwọ itoolu na-adịgide adịgide na Ministrị, Ngalaba na Ụlọọrụ dị iche iche.
Ọrụ obodo Federal kwụsịrị ọrụ mgbasa ozi
Òtù Na-ahụ Maka Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Obodo (FCSC) nyere iwu ka a kwụsị ọrụ mgbasa ozi na-ahụ maka mgbasa ozi.
Ụlọ Ọrụ Gọọmenti Federal na-amalite nnukwu ọrụ
Òtù Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Obodo nke Nigeria (FCSC) amalitela ịbanye n'ọtụtụ ministri na ụlọ ọrụ.
Ana m ewere ibu ọrụ maka nbighachi Abdulrasheed Maina - Onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide
Onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide, Ministry of Interior, Mr Abubakar Magaji, nweela ihe nchịkwa dị na nchịkwa dị iche iche nke ntinyeghachi nke onye isi oche, Kọmitii Ọrụ Ndozi Mgbapụta, Abdulrasheed Maina.
AGF Abubakar Malami gwara anyị ka anyị weghachite onyeisi obodo nke Abdulrasheed Maina - HoS Winfred ...
Head of Service of the Federation, Oriakụ Winfred Oyo-Ita, siri ọnwụ na akwụkwọ ozi sitere n'aka ụlọ ọrụ Attorney General nke Federation, AGF, na Federal Commission Service Service, FCSC, na-eduzi ntinyeghachi nke ụlọ ezumike nká onyeisi, Abdurasheed Maina.
Abdulrasheed Miana: Ọ bụghị 222 ụgwọ ezumike nká ịkekọrịta - EFCC
Ndi omekorita ndi oru ego na ego (EFCC) ekwenyeghi na ndi otu ulo oru nyocha nke ndi otu Senate kwuputara na o kesara ihe ndi oru ahu nwetara.
Abdulrashed Maina ka na-anata ụgwọ - ọkàiwu
Maazi Mohammed Katu, onye ọka iwu maka onye isi oche mbụ, Òtù Na-ahụ Maka Mmezigharị Ụlọnga ndị isi, Mr. Abdulrasheed Maina, gwara ndị nnọchiteanya na Tọzdee na onye ahịa ya ka na-anata ụgwọ ọ bụla n'agbanyeghị akụkọ ahụ a chụpụrụ ya na ọrụ.
Ụlọikpe nyere gọọmentị gọọmenti iwu ka ọ weghachite onye na - ekwuchitere NEMA, Yushau Shuaib, afọ anọ mgbe e mechara ...
Ikpe ziri ezi David Isele nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Mba, NIC, enyewo iwu ka e weghachiri onye na-ekwuchitere Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nsogbu Mberede Mba, NEMA, Yushau Shuaib, na ọrụ ọha mmadụ mgbe ọ laghachiri na 2013 maka otu echiche nke ọ dere na onye oru ego ego mbu, Ngozi Okonjo-Iweala.
Gọọmentị Federal na-adọ aka ná ntị na ndị na-achọ ka ha kwụsị ịkwụ ụgwọ maka mmega ahụ
Gọọmentị Federal, na Thursday, dọrọ aka ná ntị na ndị chọrọ ịbanye na Ọrụ Ọrụ Obodo Federal kwụsị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ maka mmega ọrụ ma ọ bụ ngwa ngwa, na-ekwu na ọ bụ iwu na-akwadoghị ma onye uweojii ọ bụla anakwere n'ụdị omume ahụ ga-enwe iwe zuru oke nke iwu ahụ.
Mmeghachi omume nke Abdulrasheed Maina, ihe nrịba ama nke ala dysfunctional
Onye isi oche nke onyeisi ndị ọrụ nlekọta na-ahụ maka mgbanwe ụlọ ezumike nká, Mallam Abdulrasheed Maina, bụ onye ọchịchị Goodluck Jonathan kwadoro na ọ ga-eme ka ndị mmadụ mara omume rụrụ arụ na ụlọ ọrụ ezumike nká na Office nke Isi nke Ọrụ.
Ndị ọrụ mmụọ: EFCC na-ebubo mmadụ itoolu na-enyo enyo
Kọmitii mmebi iwu ego na ego, EFCC, na Wednesday weputara mmadụ itoolu na-enyo enyo n'ihi na ebubo na ọ bụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ ghost na ụgwọ ọrụ nke gọọmentị etiti.
Agwara m Onye isi Buhari okwu banyere iweghachiri Abdulrasheed Maina - Winifred Oyo-Ita
Onyeisi nke ọrụ nke Federation, Winifred Oyo-Ita, kwuru na President Muhammadu Buhari maara banyere nweghachi nke onye bụbu Onyeisi oche nke ọrụ nlekọta ndị na-ahụ maka mgbanwe nchịkwa nke ndị isi obodo, Abdulrasheed Maina, n'ime ọrụ obodo Federal.
Kedu ka AGF Abubakar Malami gbaghaara ikpe ụlọikpe maka onyeisi ụlọ ezumezu Abdulrasheed Maina
Akuko ohuru kwuru na Attorney General of Federation na Minister of Justice, Mr. Abubakar Malami, SAN, gbaghariri mkpebi ikpe nke ụlọikpe dị elu nke 2013 iji hụ na e chetara onye isi oche, onye ọrụ nlekọta ezumike nkwụghachi ụgwọ, Mr. Abdulrasheed Maina. Òtù Na-ahụ Maka Ọrụ Ije Ozi na Federal.
Ihe mere President Buhari ji buru onye isi ulo ezinuzu Abdulrasheed Maina - onyeisi oche
Ndị isi oche ahụ nyere ihe ndị ọzọ mere President Muhammadu Buhari ji nye iwu ka onye isi oche nke onyeisi ndị ọrụ nlekọta na-ahụ maka mgbanwe ụlọ ezumike nká, Abdulrasheed Abdullahi Maina, si n'aka ọrụ obodo Federal.
Ihe AGF Abubakar Malami nyere iwu ka onye isi obodo ezigara Abdulrasheed Maina
Akwukwo ndi ozo banyere ndi choro onye isi oche nke ndi isi ochichi nke ndi oru ugwo oru, Abdulrasheed Maina, ka ebighariri n'ime obodo ha wee mee onye nduzi n'agbanyeghi na N2b scam ekpughere ya.
Ụlọ Nkume Rock Rock na-eme ememe Buhari
Ememme nleta nke President Muhammadu Buhari mgbe o kwusịrị ihe gbasara 104 ụbọchị nlekọta ahụike na ndị dọkịta ya na London, United Kingdom, gara n'ihu n'Ụlọ Ekpere Rock Rock, na Sunday.
Gọọmenti etiti gọọmentị na-eme ihe iji kwụsị, ọgba aghara na-aga n'ihu n'etiti ndị odeakwụkwọ na ndị ọzọ nọ na ngalaba ụlọ ọrụ ọha na eze.
Njikọ Njikọ Premier nke England na-enwe mmeri ndekọ oge ikpeazụ, dị ka otu akụkọ si n'aka Deloitte na-ahụ maka ego na-ebipụta Friday.
Ọchịchị delta na - agba ume ka Shell maliteghachi ọrụ niile na Warri
Ọchịchị Delta State rịọrọ ụlọ ọrụ Shell Petroleum Development Company (SPDC) ka ha maliteghachi ọrụ zuru ezu na Warri.
Jikwaa akụrụngwa n'ime otu afọ ma ọ bụ hapụ ikike - NCC agwa Infracos
Kọmitii Nsonye nke Nigeria (NCC) ekwuola na Ụlọọrụ Na-ahụ Maka Akụrụngwa (Infracos) ga-agbapụta anya n'otu afọ mgbe e nyechara ikikere, ma ọ bụ ha wepụrụ ikikere ha.
Navy Navy na-arịọ gọọmentị etiti maka imezi obodo
N'ịgbaso ụkọ isi ọrụ nke ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'Òtù Ndị Agha Mmiri, Onye Isi Naval Staff (CNS), Vice Admiral Ibok Ekwe-Ete Ibas, rịọrọ gọọmentị gọọmentị maka otu ọkwá pụrụ iche maka ịhazigharị ogige ndị agha na mba ahụ dum.
Onye uweojii na-ahụ maka ndị uweojii gbara akwụkwọ gburu onwe ya na Ogun
Onye uweojii na-ahụ maka ndị uweojii gbara ezumike nká, bụ David Agholor, ekwuwo na ọ nwụọ.
Chebe ndi Naijiria site na ihe isi ike nke ochichi APC kpatara - Gọọmenti Gike na agwa ndi mgbasa ozi
Gọọvanọ Gọọmenti Rivers, Chief Nyesom Ezenwo Wike, akpọtụrụ ndị mgbasaozi Nigeria ka ha teta ma chebe ndị Nigeria bụ ndị na-ata ahụhụ dị ukwuu n'okpuru ọchịchị gọọmentị Federal Congress (APC).
Umu agha Naijiria na-etinye aka na ihe ojoo megide ndi ozo, ndi ogbu na Benue, Taraba, ...
AMCON, Bank Bank na-akwụ ụgwọ na ire ereghị iwu
Ndi ochichi Kenyan na ekwu na ala di mma n'agbanyeghị mkpesa
UAE kwụsịrị ịzụ ndị agha Somalia mgbe ha nwetasịrị ego
Ụlọikpe na-edozi June 5 maka ikpe maka ozi gbasara ọgwụgwọ nke President Buhari na London
NAPTIP na-akwa ákwá n'ịkpọpụta ndị Naijiria mba mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa